ventral tegmental dရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ optogenetic inactivation အားဖြင့်သွေးဆောင်ပြောင်းပြန်အပြုအမူနျူကလိယ accumbens (2) တွင် dopamine D2014 receptors ကကမကထပြုခဲ့ - သင့် Brain On Brain
ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ optogenetic inactivation အားဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အပြုအမူအတွက်နျူကလိယ accumbens (2) တွင် dopamine D2014 receptors ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေဧပြီ 29, 2014; 111 (17): 6455-6460 ။
အွန်လိုင်းဧပြီ 15, 2014 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1073 / pnas.1404323111
Teruko Danjo,a Kenji Yoshimi,b Kazuo Funabiki,a Satoshi Yawata,a နှင့် Shigetada Nakanishia,1
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် Dopamine (DA) အာရုံခံအများအားဖြင့်ယာယီတိတ်ဆိတ်နေဖြင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်။ ဒါဟာတုံ့ပြန်မှုကိုတိုက်ရိုက်ပြုမူကြွက်တွေမှာဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု induces ရှိမရှိမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ optogenetically အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံထိန်းချုပ်နေဖြင့်ဤမေးခွန်းကိုဆန်းစစ်နှင့် DA အာရုံခံ၏ inactivation ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်ရလဒ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAc), VTA DA အာရုံခံ၏အဓိက output ကိုအရေးပါ, ဤတုံ့ပြန်မှုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်စဉ်းစား, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ၏ knockdown အသုံးပြု. ဒီအပြုအမူမှဝေဖန်ခဲ့ NAc အတွက်အခြေခံလမ်းကြောင်း၏ထားတဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည် နှင့် D2 အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီအပြုအမူများအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှ Dopamine (DA) ဂီယာကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်ဘို့အရေးကြီးသည်။ DA အာရုံခံ၏ယာယီတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုဖို့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. ယင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများအကြီးအကျယ်တွေ့ရခဲသောကျန်ရစ်ခဲ့ကြ။ ဒီမှာ, ကျနော်တို့ NAc (VTA DA အာရုံခံ၏ optogenetic inactivation စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချ-ချက်ချင်းကြောင်းသတင်းပို့ DA အဆင့်ဆင့်နှင့်နျူကလီးယပ်စ accumbens တက်-စည်းမျဉ်းဟာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏သွေးဆောင်) Fos စကားရပ်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်။ T ကချက်ချင်းပစ်ခတ် DA အာရုံခံဆဲလျသူ၏ optogenetic ဖိနှိပ်မှုယခင်ကပိုမိုနှစ်သက်မှောင်မိုက်အခန်းဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု evoked နှင့် optogenetically conditional အရပ်ဌာနဆန္ဒရှိသင်ယူမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, ဤအရပ်ဌာနခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့် NAc အတွက် dopamine D2 receptors ၏ knockdown အားဖြင့်သော်လည်းမ D1 receptors ၏အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရ. အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှု inducing နှင့် NAc အတွက် dopamine D2 receptors မှတဆင့်သင်ယူဘို့, အရှင်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ် (လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်တစ်ဦးအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်သင်ယူခြင်းမသာ1-3ပါကင်ရောဂါ, schizophrenia နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ပုံအောကဲ့သို့), ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလည်းအကြီးအကျယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် Dopamine (DA) အာရုံခံ phasic ပစ်ခတ်ရန်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်, ဤပစ်ခတ်ရန်၏အဓိက function ကို "အကျိုးကိုခန့်မှန်းအမှား" ဟုဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်များနှင့်အကြားတန်ဖိုးအတွက်ခြားနားချက်ဝှက်ဖို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အမှန်တကယ်ဆုလာဘ် (4). ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုန့်ပြန်မှမတူဘဲ, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဝေး homologous ကနေပါ၏ အများဆုံးအခြားသူများကိုယာယီသူတို့၏မီးနှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်သော်လည်းဆိုလိုသည်မှာအချို့သော DA အာရုံခံ, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် activated နေကြတယ် (5-9) ။ တကယ်တော့မကြာသေးခင်လေ့လာမှုများ (GABAergic အာရုံခံ၏ optogenetic activation နှင့် DA အာရုံခံ၏ထွက်ပေါ်လာတဲ့ inactivation ဆုလာဘ်စားသုံးမှုဖိနှိပ်နှင့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ကြောင်းထင်ရှားပါပြီ10, 11) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အကြီးအကျယ်အာရုံကြောဆားကစ်အတွက်ပေးသောယန္တရားများအတွက် VTA နှင့်ဆုလာဘ်စားသုံးမှုနှိပ်ကွပ်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေ inducing ဆီသို့ထိန်းချုပ်ထားဘယ်လိုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအဖြစ် DA အာရုံခံ၏ inactivation အောက်ပါဆန္ဒရှိသင်ယူမှု၏ဝယ်ယူဘို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဖြစ်တွေ့ရခဲသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
စုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုသင်ယူမှုအကြီးအကျယ် Basal ganglia (အပါအဝင်အာရုံကြောဆားကစ်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်12), အရာ midbrain ထံမှ dopaminergic စီမံကိန်း၏ပမာဏကြီးမားတဲ့လက်ခံရရှိသည်။ အဆိုပါ striatum ခုနှစ်တွင်နှစ်ခုအခြေခံအာရုံကြောဆားကစ် (တစ်ဦးချင်းစီ DA အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးကွဲပြား type ကိုဖော်ပြသတ်မှတ်ထားအလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) ကဖွဲ့စည်းထားပါသည်13).
တဦးတည်း circuit ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသည် Basal ganglia ၏ output ကိုအရေးပါမှထုတ်လုပ်တဲ့တိုက်ရိုက် MSNs ပါဝင်သည်ဟုဖြစ်ပါသည်, substantia nigra reticulata (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏) ဆန်းစစ်မှုနှင့်အများစု (D1Rs) dopamine D1 receptors ဖော်ပြ.
အခြားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ဖို့ globus pallidus မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်ပရောဂျက်များနှင့်အဓိကအား dopamine D2 receptors (D2Rs) ဖော်ပြသော MSNs ပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ midbrain ထံမှ DA အချက်ပြမှုများသည် dynamically (D1Rs နှင့် D2Rs မှတဆင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌ကဤနှစ်ခုကိုအပြိုင်လမ်းကြောင်း modulate, ဤမော်ဂျူစိတ်ခွန်အားနိုးသင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ယူဆနေသည်3, 14).
အဆိုပါကြိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ကြိုးအချက်ပြမှုများအားဖြင့်သွေးဆောင်တက်-စညျးမဉျြးစညျးကမျး DA အဆင့်ဆင့်ဟာ D1Rs activate လုပ်ဖို့စဉ်းစားနဲ့, အရှင်အများစုအတွက်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့လျက်ရှိသည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် DA အာရုံခံဆဲလျမီးဖိနှိပ်မှုအတွက် NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်လျော့ကျ; နှင့်ဤတုံ့ပြန်မှုအထူးသ activated D2Rs မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းထဲမှာအချက်ပြမှုဂီယာမြှင့်တင်ရန်လို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ pharmacological မဟာဗျူဟာများနှင့် Reversible လုပ် neurotransmission ပိတ်ဆို့ခြင်း (RNB) method ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကို (NAc အတွက်စည်းမျဉ်း၏ဤယန္တရားထောက်ခံခဲ့ကြပေမယ့်15, 16), က DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်များ၏ဖိနှိပ်မှုဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ရှိမရှိမသိရကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဤပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ (ရွေးချယ် optogenetically အမြှေးပါး-hyperpolarizing Arch ပရိုတိန်းကြိုးကိုင်နေဖြင့် VTA အတွက် DA အာရုံခံ inactivating နေဖြင့်ဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း17) နှင့်ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာအဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံများ၏ဖိနှိပ်မှုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှုသွေးဆောင်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့သညျဤတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်ဤဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုအထူး NAc အတွက် D2Rs ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ထုတ်ဖော်။
DA အာရုံခံလုပ်ကွက်အမှောင်-ROOM တွင်ဦးစားပေးမှု၏ Optogenetic Inactivation ။
ရွေးချယ် DA အာရုံခံမီး inactivate ဖို့ကျနော်တို့ ([-Arch AAV-ကို double-floxed inverted ပွင့်လင်းစာဖတ်ခြင်းဘောင် (DIO)] တစ်ဦး Cre-သွေးဆောင် adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် Construction encoding က Arch-eGFP ထိုးသွင်း17) တဖက်သတ်အရွယ်ရောက် tyrosine hydroxylase ၏ VTA (TH) -Cre ကြွက် (သို့18) နှင့်သားရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) littermates နှင့် VTA အထက်တွင်တစ်ခု optical fiber ကိုနေရာချ (သင်္ဘောသဖန်း။ S1 A နှင့် C) ။ နှစ်ပတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်, Arch-eGFP restrictedly (ထို VTA အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ S1B) ။ ကျနော်တို့ electrophysiological မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားဖြင့် Arch ပရိုတိန်း၏ hyperpolarizing အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပြီးနှင့် AAV-DIO-Arch နှင့်အတူထိုးသွင်း TH-Cre ကြွက်များ၏ VTA ၏ optical ဆွ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာ။ Vivo အတွက်ထုံဆေး TH-Cre ကြွက်များ၏ VTA ထံမှ electrophysiological အသံသွင်း putative DA အာရုံခံ၏ optical ဆွ (သူတို့၏မီး inhibited ကြောင်းထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း။ S2), အ optical ဆွလုံလုံလောက်လောက် Arch-ဖော်ပြ DA ဆဲလ်အမြှေးပါးအလားအလာ hyperpolarized ဤသို့မိမိတို့အလိုအလြောကျပစ်ခတ်ရန် inhibited ကြောင်းညွှန်ပြ။
ဤအကြွက်တွေအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဘေးနားရှိ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ optical inactivation အမူအကျင့်သင်ယူမှုများအတွက်ဆန္ဒရှိ signal ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကြွက် (ကမှောင်မိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်တစ်ခုပင်စိတ်သဘောထားဝင်စား19) ။ ကျနော်တို့ (လွတ်လပ်စွာမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းစူးစမ်းခြင်းနှင့်တောက်ပအာကာသဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ကြွက်များတွင်တစ်ဦးအမူအကျင့်ယန္တရားဒီဇိုင်းရေးဆွဲသဖန်းသီး။ 1A) ။ လေ့ပြီးနောက်, WT ကြွက်မှောင်မိုက်တဲ့အခန်း (ထဲမှာ optical ဆွနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဖြစ်စေအမှောင်ခန်းထဲမှာဦးစားတည်းခိုသင်္ဘောသဖန်း။ S1D), optical ဆွကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့မှောင်မိုက်အခန်း- သာ. နှစ်သက်အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်သေချာ။ ကျနော်တို့ (မိမိတို့၏အပြုအမူအပေါ် DA အာရုံခံ၏ optical inactivation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့တိရိစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုစီစဉ်ထားသင်္ဘောသဖန်း။ S1E) ။ လေ့နှင့် pretest ပြီးနောက်ကြွက်သူတို့မှောင်မိုက်တဲ့အခန်း၌ နေ. သည့်အခါတာတော့အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အေးစက်ခဲ့သည်။ (တောင်မှအေးစက်၏ပထမဦးဆုံး5မိနေစဉ်သော်လည်းကောင်း, TH-Cre ကြွက်ယခင်ကပိုမိုနှစ်သက်မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းထဲကတည်းခိုခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုအေးစက်တစ်လျှောက်လုံးအမှောင်အခန်းကိုရှောင်သဖန်းသီး။ 1B) ။ အဆိုပါ TH-Cre ကြွက် (သူတို့ posttest မှာအဘယ်သူမျှမ optical ဆွလက်ခံရရှိသော်လည်းမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းတဘက်၌သူတို့ရှောင်ရှားခြင်း reverse ဘူးသဖန်းသီး။ 1C) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ DA အာရုံခံ၏ hyperpolarization ယာယီဆန္ဒရှိအပြုအမူသွေးဆောင်ဒါပေမယ့်လည်းမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းဆန့်ကျင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်သင်ယူမှုများအတွက် signal ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်လည်း DA အာရုံခံ၏ inactivation ယာယီဆန္ဒရှိအပြုအမူနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆန္ဒရှိသင်ယူမှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍကစားကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သာကြောင်းညွှန်ပြ
လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူ၏ DA အာရုံခံလုပ်ကွက်မှောင်မိုက်အခန်း preference ကို၏ Optogenetic inactivation ။ (Aမှောင်မိုက်အခန်း preference ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ယန္တရား၏) ဥပမာတစျခု။ ကြွက်လွတ်လပ်စွာမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းနဲ့တောက်ပအာကာသပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ (B) အချိန်သင်တန်း ...
Down-Regulation အဆိုပါ NAc အတွက် DA Levels ၏ Optogenetic ။
ကျနော်တို့ဘေးနားရှိ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ inactivation တကယ်က၎င်း၏အဓိကပစ်မှတ်ဒေသသည် NAc အတွက် DA များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ကသူတို့ VTA သို့ AAV-DIO-Arch နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ထုံဆေး TH-Cre ကြွက်များတွင်လျင်မြန်စွာ Scan ကိုသိသိ voltammetry (FSCV) အားဖြင့် NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာ။ (ထို NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ချက်ချင်း VTA ၏လျှပ်စစ်ဆွနေဖြင့်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်, နှင့် evoked DA လွှတ်ပေးရန်သိသိသာသာ VTA ၏တစ်ပြိုင်နက် optical ဆွခြင်းဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ S3) ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် VTA ၏ optical ဆွဟာ NAc အတွက်လုပ်သူများ DA အဆင့်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အတူတူစမ်းသပ် setting တွင်ကျနော်တို့ NAc အတွက် DA အဆင့်အထိယာယီအဆိုပါ VTA ၏ optical ဆွ၏ 20 s ကို (အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့ကွောငျးလေ့လာတွေ့ရှိသဖန်းသီး။ 2), အဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (ဆန့်ကျင်အစီရင်ခံ FSCV တုံ့ပြန်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ20) ။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို VTA ၏ optical ဆွဟာ VTA DA အာရုံခံ inactivate နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း NAc အတွက် DA အဆင့်ကိုလျော့ဖို့လုံလောက်တဲ့ထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ optical inactivation အဆိုပါ NAc အတွက် DA အဆင့်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ (A) FSCV ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် NAc အတွက် optical ဆွဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုပျမ်းမျှ။ အစိမ်းရောင်လိုင်း (optical ဆွများ၏ကြာချိန်ကိုညွှန်ပြn = 7-11) နှင့်ပတ်သက်။ (B) ပျမ်းမျှ ...
up-Regulation အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ Optical Inactivation အားဖြင့် Fos Gene ဖော်ပြမှု၏။
အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ conditional inactivation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆိုပါအပြုအမူပြောင်းလဲမှု optical ဆွတိုက်ရိုက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များပြောင်းကုန်ပြီအတွက်ရလဒ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လာမယ့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု Fos တစ်ဦးကိုချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုဆန်းစစ်နေဖြင့် DA အာရုံခံ၏အခြေအနေ inactivation ဖွငျ့ခြီးမွှောကျခဲ့သည့်အတွက်ဒေသများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါအေးစက်မှောင်မိုက်အခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်ကြွက်လျင်မြန်စွာ (situ Hybrid ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အရေအတွက်အားဖြင့် Fos စကားရပ်၏ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။3နှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ S4) ။ အဆိုပါ NAc, အ VTA ထံမှ dopaminergic ပရိုဂျက်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအားလက်ခံတွေ့ဆုံသောဒေသ, (ထို TH-Cre ကြွက်တွေမှာ Fos စကားရပ်တစ်ခုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ငွေပမာဏကိုပြသသဖန်းသီး။ 3) ။ ဤသည်ကို up-စည်းမျဉ်းလည်းပါမယ်ကြောင်းခြမ်းသို့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့သော, optical ဆွ၏ contralateral ခြမ်းအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်ထ-စည်းမျဉ်းကိုတိုက်ရိုက်တက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့် NAc များ၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု DA အာရုံခံ၏ optical inactivation အကြံပြုခြင်း, optical ဆွ၏ contralateral ခြမ်းမှာထက် ipsilateral နားမှာအများကြီးပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ; အဆိုပါတိုးမြှင့် Fos စကားရပ်ကိုလည်း septum, အ striatum ၏ periventricular ဒေသများ, basolateral amygdala (BLA) နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အပါအဝင်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပေမယ့်မနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula သို့မဟုတ် medial prefrontal cortex (mPFC အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် သင်္ဘောသဖန်း။ S4) ။ ဤရလဒ်သည် DA အာရုံခံ၏ optical inactivation အားဖြင့် activated သည့်ဒေသများ VTA DA အာရုံခံ၏တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ဒေသများမှကန့်သတ်မခံခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြပေမယ့်မဟုတ်ဘဲသွယ်ဝိုက်တဲ့အာရုံကြော circuit ကို-မှီခိုထုံးစံ၌ activated နိုင်သောဒေသများပါဝင်သည်။ ဤသည်လေ့လာရေး (DA အာရုံခံ၏ optical inactivation circuit ကို-ကျယ်ပြန့်တွင် neuron လှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းအကြံပြုနှင့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုကျလာသောဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အခြားဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မသာ21).
optogenetic DA အာရုံခံဆဲလျ inactivation အားဖြင့်သွေးဆောင် Fos ဗီဇ၏လုပ်ဆောင်ချက်-related စကားရပ်။ (A-Cအဆိုပါ NAc အတွက် Fos စကားရပ် (အဝါရောင်) များအတွက်) ကိုယ်စားလှယ်ဓာတ်ပုံတွေ။ ရုပ်ပုံများ (က TH-Cre mouse ကို၏စိတ်ကြွဆေးအခြမ်းများ၏ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်A), အ nonstimulated ၏ ...
D2R မှတဆင့် DA signal Optogenetically သွေးဆောင်ရာဌာနဆန္ဒရှိအေးစက်ဘို့အရေးကြီးသည်။
အဆိုပါ VTA ထံမှ dopaminergic အချက်ပြမှုများ၏အများစု DA receptors, D1R နှင့် D2R မှတဆင့် NAc အတွက် MSNs မှကူးစက်လျက်ရှိသည်။ D1R နီးပါးသီးသန့် MSNs -expressing (Tac1 ဗီဇအားဖြင့် coded) ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်, D2R အများစု MSNs -expressing (Penk ဗီဇအားဖြင့် coded) ကို enkephalin အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်, MSNs ၏အသီးအသီးအမျိုးအစား (အ NAc အတွက်အသီးသီးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်း3) ။ DA များအတွက်ဆှဖှေဲ့အဆိုပါ D2R (μMအမိန့်) အတွက်ထက် D1R (nm အမိန့်) အတွက်အများကြီး ပို. မြင့်မားသည်နှင့်အမျှ (22, 23), DA အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့ချရေး, G ၏ inactivation မှုမှထင်နေသည်i(D2R -coupled ပေမယ် D1R မနျဖိုးထားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်3, 24အဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက်အထူးအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိတက်-), အားဖြင့်။ ထို့အပြင် Fos activation ပိုပြီးအဓိက Penk- သို့မဟုတ် Drd2 အတွက် (D2R) ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ Tac1- သို့မဟုတ် Drd1a ထက် -expressing ဆဲလ် (D1R) ဆဲလ် -expressing (သင်္ဘောသဖန်း။ S5) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ DA D2R မှတစ်ဆင့်အချက်ပြသည့်လေ့လာတွေ့ရှိဆန္ဒရှိအေးစက်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှနိုင်ကြောင်းတွေးဆ။
ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့သုံးယောက်-အခန်းထဲက conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) စမ်းသပ်မှု (ဖျော်ဖြေသင်္ဘောသဖန်း။ S6) ။ ကျနော်တို့လုံးဝနီးပါးတူညီအခွအေနနဲ့တစျခုအသေးစင်္ကြံနှင့်အတူနှစ်ခုအခန်းများင်တစ်ဦးအမူအကျင့်ယန္တရားပြင်ဆင်ကြ၏။ ထို CPA စမ်းသပ်မှု၌ဤဘက်မလိုက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွအေနေနောက်ထပ် VTA DA အာရုံခံ၏ inactivation မှောင်မိုက်တဲ့အခန်း preference ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများအပြင်၌, ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှု inducing နိုင်စွမ်းရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ တိရိစ္ဆာန်များလွတ်လပ်စွာတစ်ခုလုံးကိုယန္တရားန်းကျင်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်တဲ့အခါ, သူတို့ထဲကအများစုဟာ pretest မှာမဆိုပုံမှန်အမူအကျင့်ကွာခြားချက်မရှိဘဲနှစ်ခုအခန်းနေ၏။ အဆိုပါ optical အေးစက်ပြီးတော့တဦးတည်းပုံသေအခန်းထဲကအတူ optical ဆွချိတ်တွဲခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အခန်းတို့သည်လည်းကောင်းထိုအေးစက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်တောင်မှသောအခါ, TH-Cre ကြွက်ဇွဲနှင့်သိသိသာသာအေးစက်နေစဉ်အတွင်းနှင့် posttest မှာတာတော့အေးစက်အခန်းတည်းခိုရှောင် (သင်္ဘောသဖန်း။ S6 B-E) ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (WT ကြွက်များအတွက်နေအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု posttest မှာတာတော့အေးစက်အခန်း TH-Cre ကြွက်များ၏အချိန်တည်းခိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးအတည်ပြုသင်္ဘောသဖန်း။ S6F).
ကျနော်တို့ထို့နောက် (အထူး NAc အတွက် DA receptors တစ်ခုချင်းစီနှိပ်ကွပ်ဖွငျ့ဤဆန္ဒရှိအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက် DA အဲဒီ receptor Subtype သတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သဖန်းသီး။4နှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ S7) ။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့် mCherry ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစကားရပ်နှင့်အတူအသီးအသီး DA အဲဒီ receptor များအတွက်တိကျသောအတို hairpin RNA (shRNA) ပါဝင်တဲ့ lentiviral virus သယ်ဆောင်အတည်ပြု။ သုံးပတ် NAc သို့ lentivirus ထိုးသွင်းပြီးနောက်, mCherry ၏ကြံ့ခိုင်စကားရပ်ကို (NAc အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4B) ။ အသီးအသီးအဲဒီ receptor ၏ mRNA စကားရပ်၏ထိရောက်သော knockdown အရေအတွက် Real-time PCR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ပုံ။ S7 ကအတည်ပြုခဲ့သည်A) ။ အနောက်တိုင်းချေမှတဆင့်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းကိုတိုင်းတာကိုလည်း (ထို lentiviruses ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆေးထိုးရွေးချယ် DA အဲဒီ receptor ၏အခြားမျိုးကွဲများဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏ပစ်မှတ်ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်လျှော့ချကြောင်းထင်ရှားသဖန်းသီး။ 4C နှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ S7 B-G) ။ အဆိုပါ shD1R- နှင့် shD2R-ဖော်ပြ lentiviruses ± 46.2% 1.1 ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ပရိုတိန်းအဆင့်ကိုလျော့ကျခြင်းနှင့် 38.4 ထိန်းချုပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအတွက်အဆင့်ကို (နှင့်နှိုင်းယှဉ်အသီးသီး 4.9% ±သဖန်းသီး။ 4C) ။ ဤရလဒ်သည် D1R နှင့် D2R များအတွက်တိကျသော shRNA ဖော်ပြသည့် lentiviral virus သယ်ဆောင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ် RNAs နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်နှိမ့်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သက်ဆိုင်ရာပရိုတိန်းထုတ်ကုန်များ၏ပမာဏကိုကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြု။ ကျနော်တို့ကိုလည်း lentivirus-mediated shRNA တိုက်ရိုက် VTA ထိခိုက်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်ပြီး, mCherry ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated စကားရပ် VTA အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမခံခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
D2R မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ DA optogenetically သွေးဆောင်တကြ် CPA များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ (Aအဆိုပါခွဲစိတ်ကုသမှုဖေါ်ပြခြင်း) ဥပမာတစျခု။ D1R သို့မဟုတ် D2R များအတွက် shRNA-encoding က lentivirus အဆိုပါ NAc သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ AAV-DIO-Arch ဟာသို့တဖက်သတ်ထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် ...
shRNA ်သည်ဤ lentiviruses အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ DA အာရုံခံ၏ optogenetic inactivation အားဖြင့်သွေးဆောင်သည့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ DA အဲဒီ receptor ၏ထားတဲ့အမျိုးအစားစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ shRNA ပါဝင်သော lentivirus ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် TH-Cre ကြွက်၏ဘယ်ဘက် VTA သို့အတူတကွ AAV-DIO-Arch နှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံ NAc သို့ lentivirus ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာလည်း (ထို VTA အထက်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4A) ။ သုံးအခန်းထဲကတကြ် CPA စမ်းသပ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်သုံးပတ်မှာကောက်ယူတဲ့အချိန်မှာ lenti နှင့်အတူထိုးသွင်းသည့် TH-Cre ကြွက်: shD1R-mCherry ဆဲနှင့်အတူထိုးသွင်းသည့် TH-Cre ကြွက်၏နှိုင်းယှဉ်ဟာ optical ဆွ-တွဲအခန်းထဲကဆန့်ကျင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတကြ် CPA ပြသ ထိန်းချုပ်မှု lentivirus (lenti: mCherry) ။ ဆနျ့ကငျြ, lenti နှင့်အတူထိုးသွင်းသည့် TH-Cre ကြွက်: shD2R-mCherry (အေးစက်နေစဉ်အတွင်းသိသာတကြ် CPA ပြသရန်ပျက်ကွက်သဖန်းသီး။ 4D) ။ lenti နှင့်အတူထိုးသွင်းသည့် TH-Cre ကြွက်များ၏သီးသန့်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှု: shD2R-mCherry နောက်ထပ် (အ posttest မှာဆန္ဒရှိသင်ယူမှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့် substantiated ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4E) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ DA အာရုံခံဆဲလျ inactivation အားဖြင့်အေးစက်အရပျဖို့ဆန္ဒရှိအပြုအမူအထူး NAc အတွက် D2R မှတစ်ဆင့်မဟုတ်, D1R မှတဆင့် evoked ခဲ့သရုပ်ပြပါ။
အဆိုပါ striatum များတွင်လေ့လာမှုများဂျီ၏ activation ထင်ရှားပါပြီs-coupled D1R ဂျီ၏ activation သော်လည်း၎င်း၏ပစ်ခတ်ရန်စီစဉ်ပေးထားတယ်iနှိမ်နင်းပစ်ခတ်ထိရောက်မှုအတွက် D2R ရလဒ်များကို -coupled (25). AcDA အာရုံခံဆဲလျစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုများအတွက်ယာယီကျဆင်းခြင်းအများစု D1R မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းပေါ်ထွန်းရေးအားပေးအားမြှောက်သော်လည်း DA အဲဒီ receptor စကားရပ်များ၏တိကျသောမှ cording, DA အာရုံခံ၏ phasic စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုများအဓိကအား, D2R မှတဆင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင် (3, 26). စည်းမျဉ်း၏ဤယန္တရားအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် DA အာရုံခံ၏အသံတိတ်အဓိကအားဖြင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူအတွက်ရလဒ်တွေကိုတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ (3) ။ မကြာမီကလေ့လာမှုသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ Synaptic ဂီယာ၏ပိတ်ဆို့လျှပ်စစ်ရှော့ခ် (အားဖြင့်ရူးနှမ်းဆန္ဒရှိအပြုအမူများဝယ်ယူချို့ယွင်းနေသောပြသကြ15) နှင့်ဤချို့ယွင်း (D2R-mediated signal ကိုဂီယာ၏တားစီးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း16) ။ ငါဎများအပြင်, အသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက် D2R-ဖော်ပြ MSNs တက်-စည်းမျဉ်းကတော့ optogenetic အမူအကျင့်မှရှောင်ရှားခြင်း evokes (27) ။ သို့သော် DA အာရုံခံဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှိမ်နင်းစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုများပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှင့်အခြားထိတ်လန့်-related အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်တစ်ပြိုင်နက်ဦးနှောက်ထဲမှာလုပ်ငန်းများ၌ကြောင့်ကြောင့်နေဆဲ, DA အာရုံခံ၏အသံတိတ်တိုက်ရိုက်ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ရှိမရှိရှင်းလင်းခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ နှင့်ရှိမရှိကဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက် D2R-ဖော်ပြ MSNs မှတဆင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
မှောင်မိုက်အခန်း preference ကိုစမ်းသပ်မှုများနှင့်သုံးအခန်းထဲကတကြ် CPA စမ်းသပ်: ဤလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့နှစ်ခုအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုအတွက် DA အာရုံခံဆဲလျမီး optogenetic ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ optogenetic ကိုင်တွယ်သည့် VTA နှင့်ချ-စည်းမျဉ်းကတော့ NAc အတွက် DA အဆင့်ဆင့်၏ DA အာရုံခံဆဲလျမီးအကျိုးရှိစွာဖိနှိပ်မှုပြသ။ တိရစ္ဆာန်အတိအလင်းယာယီ DA တိုက်ရိုက် passive ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူစေသောအသံတိတ်ကြောင့်ဆန္ဒပြနေသောတစ်ဦးဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှု evoked ဟာအေးစက်အခန်းတည်းခိုသာကာလအတွင်း DA အာရုံခံဆဲလျမီးကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသော optogenetic inactivation ။ ထို့အပွငျ, ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု D2R-mediated signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဒီဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သင်ယူမှု၏ induction များအတွက် key ကိုပစ်မှတ်ကြောင်း elucidated သိရသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ D1R ထို CPA ကျလာသောဖို့အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်မသက်ရောက်ခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သော်လည်း, အတော်ကြာလေ့လာမှုများ (DA အာရုံခံ၏ phasic ပစ်ခတ်ရန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆန္ဒရှိသင်ယူမှုလိုအပ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ28, 29) ။ ဤသည်ခြားနားချက်စမ်းသပ် setting ကိုကြောင့်ဖြစ်၏ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ optogenic ချဉ်းကပ် DA အာရုံခံ inactivating ဆန္ဒရှိအပြုအမူနှင့်သင်ယူမှုသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, ဆန္ဒရှိအပြုအမူကျလာသောမှ activated DA အာရုံခံမှတဆင့်အချက်ပြ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်လိုက်။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked ဟာ activated DA ပစ်ခတ်ရန်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့ကဒီမှာလေ့လာခဲ့သူတွေကိုထံမှဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေမှကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကိုရှိသည်နှင့်အနာဂတျမှာရှင်းလင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။
DA အာရုံခံကိုလည်း mPFC, amygdala နှင့် hippocampus အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခြားဒေသများမှပရောဂျက်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုကြောင်းညွှန်ပြ အဆိုပါ VTA အတွက် DA အာရုံခံမှထုတ်လုပ်တဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula အာရုံခံ၏ optogenetic activation ဆန္ဒရှိအပြုအမူ inducing နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအ DA အာရုံခံအဓိကအားနှင့်အထူး mPFC ဖို့ပစ်မှတ်ထား (30), သူတို့ရဲ့ optogenetic ဆွတစ်ခုလုံးအေးစက် session များအတွက်ရွေ့ခံခဲ့ရအဖြစ်၎င်းတို့၏ optogenetic အေးစက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ထံမှကွဲပြားခြားနားခဲ့ပေမဲ့။ အဆိုပါ mPFC ဖို့ dopaminergic input ကိုဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဒါပေမယ့်လည်းနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (ခွငျးအားဖွငျ့သာ activated ခံရဖို့အစီရင်ခံထားပါတယ်သောကြောင့်31, 32), က mPFC-ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံသူတို့ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်သုံးနေတဲ့အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေအချက်ပြအဖြစ်ကိုရိပ်မိလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်; နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအေးစက်များစုစည်းနေခြင်း၏ရလဒ်သည်အတိုင်း, တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အေးစက်အခန်းထဲသို့ဆန္ဒရှိအပြုအမူကိုပြသလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်ဟာအေးစက်အခန်းတည်းခိုစဉ်တွင်ဆနျ့ကငျြဘအသုံးပြုပုံသာ DA အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန် inhibited ။ အချိန်ကိုက်-လိုက်ဖက်အေးစက်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူစမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကို DA signal ကိုတစ်ဦးရုတ်တရက်ဖိနှိပ်မှု၎င်းတို့၏လျင်မြန်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်တစ်ခုရုတ်တရက်ဆန္ဒရှိ input ကို, အဖြစ်ကိုရိပ်မိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြ။
DA အာရုံခံလည်း, ထို amygdala ဖို့အကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောတုန့်ပြန်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောဒေသပရောဂျက်။ အမှန်မှာထို amygdala ဖို့ DA အချက်ပြကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဝယ်ယူ်ပတ်သက်နေထားပြီး (33, 34) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ VTA အတွက်တံဆိပ်ကပ် DA အာရုံခံအဆိုပါ BLA မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံအစုတခုဖော်ထုတ်ပေမယ့်ဒီစီမံကိနျး၏အတိုင်းအတာဟာ NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ထက်အများကြီးနိမ့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာတွေ့ရှိဆန္ဒရှိအပြုအမူအပေါ်အချက်ပြ amygdala-projected DA တစ်သိမ်မွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖယ်နိုင်ဘူးဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ NAc အတွက် D2R ၏တိကျသော knockdown နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စမ်းသပ်ချက်သိသိသာသာလျော့သောကြောင့်, DA အာရုံခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ optogenetic inactivation ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်သည် NAc အပေါ်ဖြစ်သင့် အဆိုပါဆန္ဒရှိအပြုအမူ။ ပစ်မှတ်-တိကျတဲ့ DA အချက်ပြ addressing အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အပေါ် DA အာရုံခံ၏ circuit ကို-အကျယ်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏သက်ရောက်မှု elucidate ရန်လိုအပ်သည်။
tyrosine hydroxylase :: IRES-Cre (TH-Cre) ခေါက်-in ကိုကြွက် (EM: 00254) (18) သည်ဥရောပမောက် Mutant မော်ကွန်းတိုက်မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များ 57 သားစဉ်မြေးဆက်ထက်ပိုပြီးများအတွက် C6BL / 10J strain မှ backcrossed ခဲ့သညျ။ ကြွက်ဟာ C57BL / 6J WT ကြွက်နှင့်အတူ mated နှင့်တစ်ဦးစံ 12-ဇအလင်း / 12-ဇမှောင်မိုက်သံသရာနှင့်ပေးထားသောအစားအစာနှင့်ရေကြော်ငြာ libitum နှင့်အတူသျောခဲ့ကြသည်။ Cre+ နှင့် Cre- တူညီသောအမှိုက်သရိုက်များ (အသက်၏ 3-6 mo) မှကြွက်အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်များ၏လမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်အိုဆာကာ Bioscience Institute ၏တိရစ္ဆာန်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းကြွက်တစ်ဦး optical fiber ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုယန္တရားန်းကျင်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာထားတဲ့ optical fiber ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခဲ့ကြလျှင်ပင်သူတို့မဆိုအတားအဆီးမရှိဘဲန်းကျင်ရွှေ့နိုင်အောင်ကြွက်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ မောက်၏အနေအထားကိုဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကင်မရာအမူအကျင့်ယန္တရားကျော်ဆိုင်းငံ့နှင့် Labview software ကိုသုံးပြီးထုံးစံလုပ် program ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမှောင်ခန်း preference ကိုစမ်းသပ်။
စမ်းသပ်ရာတွင်အသုံးပြုထုံးစံလုပ်အပြုအမူယန္တရားမှောင်မိုက်တဲ့အခန်း (15 × 9.5 စင်တီမီတာ) နှင့်တောက်ပပွင့်လင်းအာကာသ (15 × 11 စင်တီမီတာ) ၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းတစ်ဦးကြမ်းပြင်နံရံများခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အနက်ရောင်ထဲမှာရောင်စုံနှင့်ပွင့်လင်းတောက်ပအာကာသတစ်ခုဝင်ပေါက် (4.5 စင်တီမီတာအရှည်) ရှိခဲ့ရာအမိုး။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်တောက်ပအာကာသတစ်ခုဘဲဥပုံနဲ့တူ shaped နှင့်တစ်ဦးအမိုးမရှိဘဲသတ္တုဇယားကွက်ကြမ်းပြင်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနံရံများခဲ့ရတယ်။ စမ်းသပ်မှုမပြုမီ, အားလုံးကြွက်တွေဟာယန္တရားအတွက် 10 မိဘို့ habituated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသုံးခုအစည်းအဝေးများပါဝင်သည်: တစ်နေ့တာ 1 ၏အစောပိုင်းထက်ဝက်အပေါ် (pretest:5မိ), ကြွက်တစ်ခုလုံးကိုယန္တရားစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ တစ်ရက် 1 များ၏နှောင်းပိုင်းကဝက်ကနေနေ့4(အေးစက်: 35 မိစုစုပေါင်း) သူတို့မှောင်မိုက်တဲ့အခန်း၌ နေ. အခါ, ကြွက် optical ဆွလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ရက်5တွင်, မှောင်မိုက်အခန်း preference ကို optical ဆွ (posttest မပါဘဲစမျးသပျခံခဲ့ရ:5မိ; သင်္ဘောသဖန်း။ S1E).
သုံးအခန်းထဲကတကြ် CPA စမ်းသပ်။
စမ်းသပ်ရာတွင်အသုံးပြုထုံးစံလုပ်သုံးအခန်းထဲက conditional ရာအရပျ preference ကို / တကြ် CPA ယန္တရားနှစ်ခုကိုအခန်းများ (10 × 17 စင်တီမီတာ) နှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်စင်္ကြံ၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသုံးခုအစည်းအဝေးများပါဝင်သည်။ နေ့ 1 (pretest: 15 မိ): ကြွက်တွေကလွတ်လပ်စွာတစ်ခုလုံးကိုယန္တရားစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အခြားထဲမှာတစ်ခုထက်အခန်းရှည် 1.5 ကြိမ်တည်းခိုကြောင်းကြွက်စမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ နေ့ရက်များ2နှင့်3(အေးစက်: 15 တစ်ဦးချင်းစီ MIN): သူတို့ကအလင်း-တွဲအခန်းတည်းခိုသည့်အခါကြွက်တွေက optical ဆွလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အလင်းကို-တွဲအခန်းထဲက၏ရွေးချယ်ရေး counterbalanced ခဲ့သည်။ နေ့4(posttest: 15 မိ): အဆိုပါစမ်းသပ်မှု (ထို pretest ၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ S6A).
အဆိုပါကြွက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အပူကိုရှောင်ရှားဖို့မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်အလင်း-တွဲအခန်း 30 s ကိုကျော်တည်းခိုသည့်အခါအေးစက် session တစ်ခုမှာ optical ဆွ 30 s အတွက်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ လေဆာပါဝါအားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုအတွက်ဖိုက်ဘာ၏အစွန်အဖျားမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5MW ဖြစ်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။
Vivo Fast-Scan ကိုသိသိ Voltammetry ၌တည်၏။
FSCV စမ်းသပ်ချက် (ယခင်လေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်း အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်35-37) ။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက်တစ်ဦး ketamine / xylazine အရောအနှောတွေနဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည် SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ နှင့် stereotaxic ဘောင်ထဲမှာထည့်ထား။ Arch-ဖော်ပြ DA အာရုံခံလှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျအသုံးပွုတစ်ခု optical fiber ကိုအဆိုပါလှုံ့ဆော်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်နီးစပ်သောတည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော် optrode ထို့နောက် VTA ထဲတွင်နေရာခဲ့သည် (bregma ထံမှ:; နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, 3.2 မီလီမီတာ; anterior-posterior, -0.5 မီလီမီတာနှင့်အ dorsal-ventral, 3.5 မီလီမီတာ) နှင့် 0.25-မီလီမီတာကြားကာလမှာလျှော့ချ။ voltammetric မှတ်တမ်းတင်ဘို့တစ်ဦးကကာဗွန်-ဖိုင်ဘာ microelectrode (အရှည် 300 μm) ကို NAc (:; နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, 1.0 မီလီမီတာနှင့် dorsal-ventral, 1.0 မီလီမီတာ anterior-posterior, 3.5 မီလီမီတာ bregma ထံမှ) သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ Voltammetric တိုင်းတာကာဗွန်-ဖိုင်ဘာ microelectrode မှ (100 V ကို / s Ag / AgCl, နှိုင်းယှဉ် V ကို -0.4 မှ + 1.3 V ကိုမှ -0.4 V) တစ်ဦးတြိဂံ waveform လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသော 400 ms လုပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကထုံးစံလုပ် potentiostat waveform အထီးကျန်မှုတွေနှင့်လက်ရှိ amplification အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ DA လွှတ်ပေးရန် 24-သွေးခုန်နှုန်းဆွ အသုံးပြု. DA အာရုံခံ၏လျှပ်စစ်ဆွ (100 μA,5ms ကြာချိန်, 30 Hz) က evoked ခဲ့သည်။ DA အာရုံခံ (532 nm, အဖိုက်ဘာအစွန်အဖျားမှာ ~5 MW ပါဝါ) ၏တစ်ဦး optical ဆွထားတဲ့လျှပ်စစ်ဆွစတင်ခြင်းမပြုမီ 10 s ကိုစတင်5s ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကာဗွန်-ဖိုင်ဘာ microelectrodes DA (0.2 μM, 0.5 μMနှင့် 1.0 μM) ၏လူသိပြင်းအားနှင့်အတူအဖြေတစ်ခုအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ အားလုံး voltammetry ဒေတာ Labview နှင့် Matlab software ကိုသုံးပြီးထုံးစံလုပ်အစီအစဉ်များအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ optical ဆွခြင်းဖြင့် DA အဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချရေး (dopamine အချက်ပြမှုများကိုခွဲခြားရန်လျှပ်စစ် VTA စိတ်ကြွဆေးထံမှရရှိသော template ကို DA waveforms သုံးပြီးအသုံးပြုပုံကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူဖြေရှင်းခဲ့သည်35, 36).
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ GraphPad PRISM 5.0 (GraphPad Software များ) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဒေတာကိုထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA (အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1B, , 4D,4Dနှင့် သင်္ဘောသဖန်း။ S6 D နှင့် E) သို့မဟုတ်တလမ်း ANOVA (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1C, , 3D,3D,4C နှင့် Eနှင့် သင်္ဘောသဖန်းသီး။ S4 K-M, S6Fနှင့် S7A), နဲ့ post hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ Bonferroni စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုခံခဲ့ရသည်။ အားလုံးအမှတ် / ကော်လံနှင့်ဘားအသီးသီးယုတ်နှင့်± SEM ကိုယ်စားပြုသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြင်ဆင်မှုများနှင့်ဆေးထိုး, electrophysiological အသံဖမ်းနှင့် immunohistochemical နှင့် mRNA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်အခြားစမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားကြသည် SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ.
ကျနော်တို့ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းအကွံဉာဏျများအတွက် Arch အဘို့အီး Boyden တည်ဆောက်ရန်, lentivirus ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သန့်စင်အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ် R. Matsui နှင့် Y. Hayashi ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်း, (TD) ကို 22220005, နှင့် (SY မှ) 23120011 ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်, ယဉ်ကျေးမှု, အားကစား, သိပ္ပံ (SY နှင့် SN မှ), သုတေသနထောက်ပံ့ရေး-In-Aid ကို (SN) ကို 24700339 အားဖြင့် 25871080 ထောက်ခံနှင့်ခံခဲ့ရပါတယ် ဂျပန်နည်းပညာနှင့် (SN) ကို Takeda သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းကနေထောက်ပံ့ကြေး။
1 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004;5(6): 483-494 ။ [PubMed]
2 ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2007; 30: 259-288 ။ [PubMed]
3 ။ Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto က M, စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Hikosaka O. Dopamine: အပြစ်ပေးခြင်းကိုမနှစ်သက်ခြင်း, အာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 68 (5): 815-834 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275 (5306): 1593-1599 ။ [PubMed]
5 ။ Schultz W က, အမေ့ဆေးမျောက်အတွက်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု somatosensory ဆွဖို့ nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏ Romo R. တုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1987; 57 (1): 201-217 ။ [PubMed]
6 ။ Ungless MA, Magill PJ, Bolam JP ။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ယူနီဖောင်းတားစီး။ သိပ္ပံ။ 2004; 303 (5666): 2040-2042 ။ [PubMed]
7 ။ Brischoux က F, Chakraboty, S, Brierley ပစ, Ungless MA ။ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2009; 106 (12): 4894-4899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Matsumoto က M, Hikosaka O. dopamine အာရုံခံဆဲလျနှစ်ယောက်အမျိုးအစားများအဖြစ်ထင်ရှားစွာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုဖျောပွ။ သဘာဝ။ 2009; 459 (7248): 837-841 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Cohen ကို JY, Haesler S က, Vong L ကို, ဝယျလျ BB, အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အဘို့အ Uchida N. အာရုံခံ-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အချက်ပြ။ သဘာဝ။ 2012; 482 (7383): 85-88 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ et al Tan က KR ။ အဆိုပါ VTA ၏ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မောင်းတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2012; 73 (6): 1173-1183 ။ [PubMed]
11 ။ ဗန် Zessen R ကို, Phillips က JL, Budygin EA ၏, Stuber GD ။ VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏ activation ဆုလာဘ်စားသုံးမှု disrupts ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2012; 73 (6): 1184-1194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Packard တို့ MG, Knowlton BJ ။ အဆိုပါ Basal ganglia ၏သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2002; 25: 563-593 ။ [PubMed]
13 ။ Surmeier DJ သမား, သီချင်း WJ, neostriatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် dopamine receptors ၏ယန် Z. Coordinated စကားရပ်။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16 (20): 6579-6591 ။ [PubMed]
14 ။ Surmeier DJ သမား, Plotkin J ကို, Shen ဒဗလျူ Dopamine နှင့်အရေးယူရွေးချယ်ရေးထိန်းချုပ် dorsal striatal ဆားကစ်အတွက် Synaptic plasticity ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2009; 19 (6): 621-628 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Hikida T က, Kimura K ကို Wada N ကို, Funabiki K ကို Nakanishi အက်စ်ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာ၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 66 (6): 896-907 ။ [PubMed]
16 ။ et al Hikida T က။ ရွေးချယ် transmitter ကို receptors မှတဆင့်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏လမ်းကြောင်း-တိကျတဲ့မော်ဂျူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2013; 110 (1): 342-347 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ et al Chow BY ။ အလင်း-မောင်းနှင်ပရိုတွန်ပန့်များအားဖြင့် high-performance ကိုဗီဇ targetable optical အာရုံကြောတိတ်ဆိတ်။ သဘာဝ။ 2010; 463 (7277): 98-102 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ et al Lindeberg J ကို။ Cre ၏ Transgene စကားရပ် tyrosine hydroxylase locus ထံမှ recombinase ။ ကမ်ဘာဦး။ 2004; 40 (2): 67-73 ။ [PubMed]
19 ။ Bourin M က, Hascoëtအမ်အဆိုပါ mouse ကိုအလင်း / မှောင်မိုက် box ကိုစမ်းသပ်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2003; 463 (1-3): 55-65 ။ [PubMed]
20 ။ Roitman MF, ဝီ RA, Wightman RM, Carelli RM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် real-time ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုခွဲခြား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11 (12): 1376-1377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ LeDoux je ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဆားကစ်။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2000; 23: 155-184 ။ [PubMed]
22 ။ Maeno အိပ်ချ် Dopamine ခွေးတစ်ကောင် caudate နျူကလိယအတွက် receptors ။ Mol ဆဲလ်ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 1982; 43 (2): 65-80 ။ [PubMed]
23 ။ Richfield ek, Penney JB, Young က AB ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience ။ 1989; 30 (3): 767-777 ။ [PubMed]
24 ။ ဆုလာဘ်-oriented မျက်စိလှုပ်ရှားမှု၏ Hikosaka O. Basal ganglia ယန္တရားများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1104: 229-249 ။ [PubMed]
25 ။ Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30 (5): 228-235 ။ [PubMed]
26 ။ ဖရန့် MJ ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် dynamic dopamine မော်ဂျူ: Medical နှင့် nonmedicated Parkinson အတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏တစ်ဦးက neurocomputational အကောင့်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2005; 17 (1): 51-72 ။ [PubMed]
27 ။ Kravitz AV စနစ်, Tye ld, Kreitzer AC အ။ အားဖြည့်အတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း striatal အာရုံခံများအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2012; 15 (6): 816-818 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Fadok JP, Dickerson TM, Palmiter RD ။ Dopamine cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29 (36): 11089-11097 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ et al Zweifel LS ။ dopamine အာရုံခံ၏ activation generalized စိုးရိမ်စိတ်၏ဆန္ဒရှိအေးစက်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဘို့အရေးကြီးသည်။ နတ် neuroscience ။ 2011; 14 (5): 620-626 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Lammel S က, et al ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ input-တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ။ 2012; 491 (7423): 212-217 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Mantz J ကို, Thierry လေး, mesocortical နှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ဥတုမှုနှုန်းအပေါ် noxious အမြီးအဖြစ်တော့၏ Glowinski ဂျေ Effect: အ mesocortical စနစ်၏ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 476 (2): 377-381 ။ [PubMed]
32 ။ Tidey JW, Miczek Ka ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုရွေးချယ် mesocorticolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 721 (1-2): 140-149 ။ [PubMed]
33 ။ Pezze MA, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် Feldon ဂျေ Mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း။ prog Neurobiol ။ 2004; 74 (5): 301-320 ။ [PubMed]
34 ။ de la Mora အမတ်, Gallegos-cari တစ်ဦးက, Arizmendi-Garcia က Y, Marcellino D ကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်များ amygdaloid မော်ဂျူအတွက် dopamine အဲဒီ receptor ယန္တရားများ၏ Fuxe K. အခန်းက္ပ: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ prog Neurobiol ။ 2010; 90 (2): 198-216 ။ [PubMed]
35 ။ Heien ML, ဂျွန်ဆင်, MA, Wightman RM ။ အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ neurotransmitters ဖြေရှင်း။ စအို Chem ။ 2004; 76 (19): 5697-5704 ။ [PubMed]
36 ။ et al Heien ML ။ ပြုမူကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်းအပြီး dopamine အတက်အကျ၏ real-time တိုင်းတာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2005; 102 (29): 10023-10028 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Natori S က, et al ။ မောက် dorsal striatum အတွက် Subsecond ဆုလာဘ်-related dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience Res ။ 2009; 63 (4): 267-272 ။ [PubMed]